Ugari neInvestment yeGrenada uye Golden Visa
Isu tinopa Ehupfumi Kuenda Kunoshanda Sevhisi muGrenada ye:
● Kugara nekudyara muGrenada
● Ugari nekudyara kubva kuGrenada
● Visa yegoridhe muGrenada
● Pasipoti yechipiri kubva kuGrenada
● Ugari nekudyara kweGrenada nekudyara muzvivakwa
Best Vamiririri veCitizenship neInvestment muGrenada uye Magweta e Ugari neInvestment kuGrenada uye ma broker emidziyo Zvivakwa Citizenship zvirongwa muGrenada zvinoshanda zvakabatana kuchengetedza kwevatengi.
Citizenship neInvestment vamiririri veGrenada inopa masevhisi ekugara nekudyara kuGrenada, Citizenship nemapurogiramu ekudyara muGrenada, Citizenship nehurongwa hwekudyara muGrenada, Citizenship yechipiri nekudyara kuGrenada, Citizenship huviri nekudyara kuGrenada, ugari hwehugari nekugara nekudyara kuGrenada. , Citizenship yekusingaperi nekudyara kuGrenada, Citizenship kwenguva pfupi nekudyara kuGrenada, Citizenship nehurongwa hwekudyara kuGrenada, Citizenship nehurongwa hwekudyara kuGrenada, Residency nekudyara kuGrenada, Residency nezvirongwa zvekudyara muGrenada, Residency nehurongwa hwekudyara muGrenada, wechipiri Kugara nekudyara kuGrenada, mbiri Residency nekudyara kuGrenada, pekugara uye ugari nekudyara kuGrenada, kugara uye ugari nekudyara kuGrenada, hupfumi Residency zvirongwa muGrenada, Residency nechirongwa chekudyara muGrenada, Residency nezvirongwa zvekudyara kuGrenada, kechipiri. pasipoti muGrenada, yechipiri pas zvirongwa zvemitambo muGrenada, chirongwa chechipiri chepasipoti muGrenada, mbiri pasipoti pasiti muGrenada, pekugara uye yechipiri pasipoti kuGrenada, repasipoti repasipoti repiri kuGrenada, repasipoti repasirese nekudyara kuGrenada, yechipiri ugari pasipoti kuGrenada, yechipiri pasipoti chirongwa kuGrenada, chechipiri zvirongwa zvepasipoti muGrenada, vhiza yegoridhe kuGrenada, mavhiza egoridhe kuGrenada, zvirongwa zvendarama vhiza muGrenada, chirongwa chendarama vhiza kuGrenada, vhiza yechipiri vhiza kuGrenada, chirongwa chechipiri vhiza yegoridhe kuGrenada, mbiri vhiza visa kuGrenada, ugari uye vhiza yegoridhe kuGrenada, kugara uye vhiza yegoridhe kuGrenada, mugari vhiza mugari muGrenada, chirongwa chendarama vhiza kuGrenada, zvirongwa zvegoridhe vhiza kuGrenada.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Citizenship nekudyara kuGrenada nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment muGrenada ye Citizenship nekudyara: USD 150,000
Nhanganyaya Grenada uye Citizenship neInvestment
Dzidza zvakawanda nezveGrenada
Grenada iri muSouth Caribbean, 12 degrees kuchamhembe kwequator uye pasi pebhanhire remhepo. Madutu haana kujairika. Icho chitsuwa chinoputika chiri kutsvedza uye chine masango anonaya emvura ane gumi akakosha macascades. Mahombekombe egungwa echitsuwa ichi uye matombo anodzivirira chikamu chakakosha cheAtlantic kubva pamasaisai makuru, uye divi reCaribbean rakanyarara. Inopfuura hafu yechitsuwa haina makwenzi backwoods, uye iyo yasara yenharaunda ine masango inongozara nevanhu. Nekuda kwenzvimbo inonaya zvikuru, kune anoshamisa maonero kwese kwese nzvimbo. Makomo akatanhamara, mipata yakasvibira, uye bounty yegungwa rinopenya rinoona zvichiratidza zvisingaite semigwagwa inokomberedza yakatenderedza jogirafi. Zvisinei nehupenyu hwese hwakajairwa, Grenada ndeimwe yeakakosha Leatherback Sea Turtle inogadzirisa nzvimbo muCaribbean. Iyo Leatherback Gungwa Turtle ndiyo repasi rechina rakakura kwazvo reptile, inogona kukura kusvika pamamita matanhatu pakureba, uye inorema kusvika zviuru zviviri zvemalbs. Gore rega rega kumwe kunhu kune mazana manomwe negumi emisha dzimba dzinoiswa muchikamu chekuchamhembe kwechitsuwa. Vanhu vemunharaunda uye nevanhuwo zvavo vanobva kwese kwese pasi vanouya kuzoona chiitiko chakasarudzika uye kusarudza kumaka, kudzidza, uye kuunganidza ruzivo rwakakosha nezve iyi mhuka yakashata.
Zvisikwa zvinodzora chitsuwa ichi, zvisinei, kune mamwe mabhuru ezviitiko uye makwapa ekuongorora. Concerts, akasiyana cruattatt regattas, Iyo National Museum, yechinyakare asi inoshanda rum yekuchenesa, yakanaka magadheni, uye anoshanda madomains anokudziridza cocoa, nutmeg, uye yakafara assortment yemafuta, zvigadzirwa zve organic, uye miriwo zvese zvinokwezva vaviri vashanyi uye vanhu vemuno. Grenada ingangove yakanyanya kushambira uye ichinyudza nzvimbo iyi kusanganisira nharaunda yenjodzi yeBianca C, inowedzera inonzi Titanic yeCaribbean. Iyo zvakare iri kumba kune huru yakanyudzwa modhi paki pasi. Grenada nderimwe remapoka ane mwero ezvitsuwa zveCaribbean uko kunofungidzirwa kutenga dutu rekudzivirira dutu rechikepe. Vazhinji vanhu vanogadzira zvikepe zvavo muGrenada munguva yekunaya kwemvura. Iko kune hombe, seta yachting / cruising network. Masere mamasina anopa kuwedzeredza uye kugadzirisa manejimendi, kuchengetedza uye kugovera zvikepe zvidiki zvinosvika mazana matatu emamita superyachts.
Kukunda mhepo yekutengesa inochengetedza tembiricha kumwe kunhivi dze 70 uye 88 degrees (zvakajairika 77 kusvika 81 degrees) uye mwaka weblustery unogona kuzivikanwa senguva yegirini. Kunyangwe paine chokwadi chekuti kunonaya mazuva mazhinji kubva Kubvumbi kusvika Mbudzi, mashawa akapfupika-anogara achitsungirira pasi pemaminitsi gumi nemashanu. MaGrenadians nekuwanda vanowana chimiro chekudzivirira mukati kwenguva pfupi, votora nguva yakarasika nenhau dzekuvakidzana, uyezve voenderera mberi nenzira yavo panodzoka zuva. Sezvaunoswedera padhuze nesango remvura, rinonaya zvakanyanya kuomarara uye kazhinji zvakanyanya.
Iyo Guta Guru, St. George's, inzvimbo inoshamisira kune ese mabhizimusi makuru uye kunotenga uye mumashure, ingori kukuvara kupfupi muzvisikwa. 58% yevanhu vanogara mukati kana munzvimbo dzakatenderedza kana St. Georges kana Grenville, iro rakanyanya "guta" pachitsuwa. Vazhinji vamwe, kusanganisira ex-pats, vanogara kana padyo nemakungwa. MaGrenadians akavhurika, anokoka uye kupenya kwavo hakudzivisike. Wese munhu anoita kuzivana kwakaringana neumwe neumwe munhu seari kusvika zuva ravo. Pane mukana wekubudirira wauri kuva nawo mumutsara uye nzira yakavandudzwa yemunhu wega, vanotaura mangwanani makuru, uye munhu wese mumutsara anoti mangwanani makuru kumashure. Zvakaoma kuramba uchinzwa zvinotyisa kana munhu wese achikushuvira zvakanaka chero kwaunoenda. Ndakafonera eatery yaive pedyo imwe Svondo kuti ndione kana taigona kudya ipapo. Muridzi wemba akadaira ndokuti, "Isu takavharwa nhasi, zvisinei nemukana wekuti une hutsinye, ndinokupa chikafu." Rudzi urwu rwemubatanidzwa rwakajairika muGrenada. Vanhu vamwe nevamwe vanoedza zvakanyanya kubatsira. Patakasiya mota yedu mumugwagwa mutete, isu tisingazivi takadonhedza tai redu repamberi munzira yakavhurika, yakadzika yebhokisi. Mafupa emota anga akarara paasphalt. Pataiyedza kuronga zvekuita nekukasira, varume vana veGrenadian vakagumburwa, ndokutora mota yedu, ndokumisa kumashure kwese kwese, takabata hood, ndokutisimudzira munzira.
Paive nekuwedzera nguva yatakarasika pandakakurudzira imwe nzira kuburikidza nesango remvura. Sezvinoratidzwa negwara, mugwagwa wakananga mudhorobha. Sezvataityaira, kosi yakazove yakanyanya kusimba zvekuti hatina kukwanisa kuenderera. Chinhu chega chegomo chaive kuruboshwe, uye kuparara kwakaputsika kuri kurudyi. Pataifamba tichikambaira tichidzika nemugwagwa, mumwe murume wezwi rake akabva abuda mugwenzi ndokuti, "Mudiwa, urikuitei munzvimbo ino yakashorwa naMwari?" Akasekerera uye akatizivisa kwatiri kuti mugwagwa hauna kunge wakachengeteka kwenguva yakareba uye wakatidzosera kumashure kufambiro mberi. Uku kunzwa kwekubatana uye kutsigira kunotambudza chiwi.
MaGrenadians akanyanyisa kuomarara, zvisinei, inzira inonamira, inonamatira yekutarisana nehupenyu. Ivo vanobvuma kuti hupenyu kurwa uye vanokumbira kuna Mwari kuti avatsigire. Ivo vane hukama hwehukama naMwari icho chiri chero chinhu asi chinonetsa kuva pedyo. Ivo havasi kuyedza kushandura chero mumwe munhu. Kana iwe ukabvunza kana vari kuuya mangwana, mhinduro yakakodzera inoenderana "Chokwadi, fadza Mwari" kana "Mwari achida."
Nhaka nemagungano zvakakosha. Nziyo dzeCalypso dzinopa ongororo inomhanya pazvinoitika zvichangoburwa, Carnival, Pageantry, zvakajairika artworks, Pan mimhanzi, kufamba kweAfrica, uye kuridza ngoma zvinorumbidzwa zvakazara sezvo maGrenadians vachiedza kuchengetedza zvakanakisa zvinoita kuti inova yechitsuwa ive mhenyu uye ine simba ichiri kubata indasitiri yekufamba. , kufambira mberi, uye hunyanzvi.
MaGrenadians vanofadzwa nekokorodzano dzekudya munharaunda yavo - kunyanya chikafu chinonaka cheveruzhinji, Oil Down. Iyo inogadzirwa uchishandisa pasi kokonati, hove, huku, callaloo, madomoni, uye zvinonaka zvinwiwa uye rinowana zita rayo kubva kukokonati rinobika pasi kuita muto. Iyo ingori chete yeakawanda anoverengeka anokosha, akavimbika madhishi. African, French, uye Indian nzira dzekubika uye zvinonaka zvinonaka chikafu chemunharaunda.
Grenada inozivikanwa seSpice Island nekuda kwehuwandu hweavhenji akagadzirwa. Inoburitsa makumi matatu neshanu muzana yenutmeg yepasirese, uye inofungidzirwa nevanhu vazhinji kuti ndiyo yakanakisa nekuda kwekunhuhwirira kwayo uye pasoggy pamusoro. Nutmeg chidimbu chakakosha cheGrenada icho chinotaurwa kwachiri pabanner yeruzhinji uye muhurongwa hwekuvaka hweparamende.
Zvekutanga ruzivo rwe Citizenship neInvestment yeGrenada
Chishoma kudyara kwe Citizenship nekudyara muGrenada
Mari yekuwedzera ye yendarama vhiza ye Grenada
Ugari nekudyara kweGrenada
Kunanga ugari uye pasipoti
Kuchengetedza nguva yeU Citizenship nekudyara kweGrenada
Ugari Hwenyika Hwakabvumidzwa vagari vemuGrenada
Investment Sarudzo dze Ugari nekudyara kweGrenada
USD 220,000 Real estate investment (mashoma mugove) USD 150,000 National Shanduko fund donation (isingadzoreke)
Nei uchienda kuCitizenship nekudyara kweGrenada
Grenada inopa chirongwa chehugari-hwe-hwekudyara icho chine hanya neavo vari mudunhu: Grenada inopa pasipoti chete iyo inoita kuti uve nekodzero yekusava mutorwa vhiza kuenda kuUSA. Ndiyo zvakare nyika yeCaribbean chete ine vhiza-yemahara yekuenda kuChina. Ehezve, chirongwa cheGrenada chekuva mugari-ne-inisitirimendi zvakare ine zvakanakira mamwe mapurogiramu akadaro munyika, senge yekukurumidza uye nyore maitiro, mukana wekusanganisira vepedyo vemhuri muchikumbiro uye yepasirese yemutero-yemari. Kupfuura zvese, Grenada ine imwe yepasirosi yakaderera kudiwa kwezvirongwa zveCaribbean.
Mhuri inopinda muGrenada
Kuwedzera kubatsirwa kwepasipoti yako nyowani yeGrenadian kune nhengo dzemhuri yako hakuna kunetsa. Iwe unogona kusanganisira mumwe wako, vana vako vanovimba nemari vari pasi pemakumi maviri nemashanu, uye kunyange vabereki vanovimba pamusoro pemakore makumi matanhatu nemashanu.
Ugari Nechirongwa chekudyara muGrenada insite
Iyo mugari-we-inisitendi chirongwa cheGrenada ndeimwe yeanokurumidza: unogona kuve nepasipoti yako nyowani mumwedzi ye3-4. Yako yekutanga sarudzo ndeye isingadzokere mari yemupiro yekuwana ugari hweGrenadian nekudyara. Iyi sarudzo inovimbisa yekukurumidza maitiro: sarudzo inoitwa mukati memazuva makumi matanhatu mushure mekubvumirana, pasipoti yako ichigadzirira mune mamwe mazuva gumi.
Sarudzo inotevera ndeyekudyara muzvivakwa. Mune ino kesi, iyo nguva yenguva inoenderana nekufambira mberi kweprojekiti yezvivakwa.
Munguva yekuita basa, haufanire kuenda kuGrenada. Kana iwe wawana ugari hwako, unogona kusarudza kugara kunze kweGrenada - mune izvo kesi haufanire kubhadhara mutero pamari yako yepasirese.
Mari inodiwa yeGrenada
Chipo chisingadzoreke kuNational Transformation Fund yeinosvika madhora mazana maviri emadhora ndiyo nzira iri nyore yekuwana ugari hweGrenadia nekudyara. Kana iwe ukasarudza musiyano wezvivakwa, uchafanirwa kutenga chivakwa kubva kuhurongwa-hwakagamuchirwa nehurumende kweinosvika madhora mazana matatu mazana matatu emadhora, woichengeta kweinenge makore matatu.
Nezve iyo real estate sarudzo, kune imwezve mari yehurumende yemadhora zviuru makumi mashanu zvemazana zvemhuri inoonekwa sevanhu vana.
Mutengi kutsigira Citizenship nekudyara kweGrenada
Chikwata chedu che Citizenship neInvestment Agents eGrenada uye Citizenship ne Investment Lawyers zveGrenada inopa vatengi uye mhuri dzavo kuGrenada nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuGrenada, kugara nekudyara kubva kuGrenada uye mimwe mikana yekudyara yekubva kune dzimwe nyika, munyika makumi matatu nenomwe.
Masevhisi edu haana kungogumira kugari nekudyara kubva kuGrenada kana Golden Visa kubva kuGrenada kana ugari hwemo nekudyara kubva kuGrenada kana yechipiri pasipoti, isu tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara dzimba kubva kuGrenada, ichipa mhinduro izere kana iwe uchida kutanga kambani mu Grenada kana kumahombekombe, zviwanikwa zvevanhu muGrenada uye zvimwe zvakawanda, izvo zvinosanganisira kuronga zvemari nezvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye kubva kuGrenada uye sekondari pekugara.
Rutsigiro Rwakakosha kune Vagari veGrenada:
Isu tinopa zvinodhura Citizenship nekudyara mabasa zveGrenada, kuburikidza neyedu inokwanisika mari yekudyara uye yekufambisa mutemo kweGrenada, inokwanisika inivhesitimendi mari yekuenda kune dzimwe nyika vanokumbira Grenada, inokwanisika Citizenship nevanoona mari yekudyara yeGrenada, inokwanisika Citizenship nemagweta ekudyara eGrenada uye inodhura yekuenda kune dzimwe nyika femu yeGrenada.
Ugari nekudyara kubva kuGrenada kuenda ku37 Nyika.
Ndarama vhiza kuGrenada kuenda ku37 Nyika.
Yechipiri pasipoti kubva kuGrenada kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Kubva kune dzimwe nyika kubva kuGrenada kuenda ku106 Nyika.
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuGrenada.
Goridhe visa zvirongwa muGrenada kuenda ku37 Nyika.
Ugari nezvirongwa zvekudyara kubva kuGrenada kuenda ku37 Nyika.
Chechipiri pasipoti zvirongwa kubva kuGrenada kuenda ku37 Nyika.
Mapurogiramu ebhizinesi ekupinda munyika kubva kuGrenada kuenda ku106 Nyika.
Ugari neInvestment yeGrenada kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvekudyara zvivakwa muGrenada nemaonero ekuti mutengi anofanirwa kuwana kudzoka kwakanaka pane kudyara kuGrenada, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwakaitwa navo kweUgari hwavo nekudyara kweGrenada. Isu tinosungirirwa nevashoma vashoma vezvivakwa zvevatengesi kuGrenada vane yakanaka track rekodhi uye yavo pfuma iri munzvimbo dzakanaka kuGrenada, kutora zvakanaka kudzoka.
Yakanakisa edzimba dzimba zvirongwa zveGrenada nemari yekudyara muzvivakwa muGrenada.
Unoda kuziva - Grenada Citizenship neInvestment
Citizenship neInvestment Gweta yeGrenada ichapa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa kune yako yakabudirira Citizenship nekudyara kuGrenada. Yedu standard masevhisi e Citizenship neInvestment kuGrenada inosanganisira:
Magweta edu anonzwisisa zvaunoda kuti utamire kubva kuGrenada kana kuGrenada, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira Citizenship nekudyara kweGrenada kune vatengi kuti vawane Citizenship yeGrenada uye kudzikisa njodzi yekuramba.
Kubva pane mushumo wekushingairira Grenada, isu tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira zvirinani.
Kuti isu tifambire mberi neU Citizenship hwako nechikumbiro chekudyara kweGrenada isu taizoda makopi akaongororwa evatengi nenhengo dzemhuri pasipoti.
Dudziro uye apostile emagwaro Zvizvarwa zvemo nekudyara kunyorera Grenada. Magweta edu akasarudzika e Citizenship nekudyara kweGrenada uye goridhe visa ichabatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zveCitizenship nekudyara kunyorera kweGrenada yagadzirira, isu tichazoizadza neakakodzera zviremera zveGrenada.
Kana chikumbiro chako cheU Citizenship nekudyara kweGrenada chabvumidzwa, tinogovana nhau dzakanaka newe uye totanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Isu hatitsigire kana kupa Citizenship neinvestment services kuGrenada kune pazasi vanotaurwa Vanhu kana mabhizinesi muGrenada:
Citizenship nebasa rekudyara Grenada hadzisi kupihwa kune Vatengesi kana vanogovera maoko nezvombo kubva kuGrenada.
Citizenship nezvirongwa zvekudyara zveGrenada hadzipi kupihwa kweTechnical kuongororwa muGrenada kana maindasitiri espionage emapurogiramu ekudyara mukati kana kubva kana kuGrenada.
Citizenship nekutsvaga kwekudyara kweGrenada hadzipi kupihwa chero zvisiri pamutemo kana tsotsi zviitiko muGrenada.
Citizenship nerutsigiro rwekudyara zveGrenada haisi yevanhu vanobata maGenetic zvinhu muGrenada.
Citizenship nebasa rekudyara Grenada haisi yemabhizinesi anotengesa zvombo zvine njodzi kana zvine ngozi zvebhagiri kana zvombo zvenyukireya muGrenada.
Citizenship nechirongwa chekudyara rutsigiro rweGrenada haruwanikwe kune vanhu veGrenada vanobata mukutengesa, kuchengetedza kuGrenada, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Citizenship nekudyara zveGrenada haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Citizenship zvirongwa zvebasa zveGrenada hadzisi dzezvitendero zvechitendero uye avo anobatsira muGrenada.
Citizenship nebasa rekudyara mu Grenada haina kupihwa kune vanhu vanobata mune Zvinonyadzisira muGrenada.
Ugari Hwedu magweta muGrenada haitsigire bhizinesi rekutengesera mumidziyo yezvinodhaka muGrenada.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi veGrenada neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekurambwa chero kupi zvako kubva kuzviremera zveGrenada kuti vabvumirwe kunyorera Citizenship nekudyara muGrenada.
Ugari nekudyara muGrenada nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa hukuru hwehukama nerutsigiro rwekudyara muGrenada yekudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa muGrenada.
Inotsigirwa nehukama hwepasi rose nehunyanzvi hwekudyara uye zvinodiwa neGrenada zviri pamutemo, tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Hwedu Hugari nemasevhisi ekudyara kweGrenada inopa mitengo yakachipa, ine chinzvimbo chinobudirira cheGrenada.
Isu takatora makore eruzivo kune hunyanzvi hwehukama kuGrenada inotsigira vatengi uye mhuri dzavo kuGrenada.
Ruzivo rwekuva Citizenship nekudyara kukumbira kweGrenada nevamiriri vepamutemo veGrenada vachipa rutsigiro kune vatengi.
Tine akanakisa magweta nevamiriri veGrenada yekubata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Usati uri Citizenship yako yeGrenada uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro yaizovapo kune bhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuGrenada
Isu tine ruzivo rwepasi rose mu Citizenship nekudyara kusanganisira Grenada, kubatsira vatengi kubva kumativi ese epasi nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Citizenship yako nekudyara kuGrenada ikakundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu neshanu dzatinoshandira, isu takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weCitizenship neInvestment kuGrenada
Kuti uverenge mutengo weCitizenship nekudyara kweGrenada ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba yakakura yevatengi yeGrenada, isu tinokwanisa kupa zvirinani masevhisi nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchasanganisira, kunosanganisira, mutengo weCitizenship nehurongwa hwekudyara kweGrenada uye zvimwe zvikwereti.
mhando vhiza zveGrenada
Maitiro Ekubvumirwa kweGrenada
Kwekugara kwenguva pfupi muGrenada
Permanent Residence muGrenada
Embassies uye ma Consulates eGrenada
Ugari neInvestment muGrenada uye Mamwe maSevhisi
Isu takanyora pasi mashoma mashoma masevhisi atinopa kuGrenada kune izvozvi kana zvemberi zvinodiwa.
Kana iwe uri kuronga kutamira nemhuri yako kuGrenada nekudyara mari, isu semumwe wako weGrenada, tiripo kuti tipe zvakawanda zveimwe sevhisi uye uye kana paungangoda muGrenada nemitengo inodhura.
Kunze kweCitizenship nekudyara kwekudyara kweGrenada, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare kuGrenada, iyo iwe yausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nechero vamwe vanopa mazano eGrenada ichitigadzira one-stop shop yeGrenada nenyika dze106.
"Isu takaisa makore ekuyedza uye nepasi rose mu106 Nyika kubatsira mhuri, vanhu, uye bhizinesi reGrenada mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira nzira yemutengi wedu kupfuura Citizenship nekudyara kweGrenada nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye kusunga muGrenada nepasi rese.
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani kuGrenada kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani kuGrenada yakachipa nesu.)
Akaundi yeBhangi muGrenada
Chero ani investor anotamira kuGrenada angazoda akaundi yako kubhengi kuGrenada uye account yebhangi yekambani muGrenada, isu tinogona zvakare kubatsira nemaoffshore bank account.
Peji yekubhadhara muGrenada
Incase iwe unoda kubvunzana muGrenada, ye dhijitari yekubhadhara mhinduro muGrenada senge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi muGrenada kana crypto mhinduro, tizivise.
Mushure meCitizenship nekudyara ku Grenada kana uchironga tanga bhizinesi nekutenga ravepo bhizinesi muGrenada kutanga pakarepo muGrenada.
HR Services muGrenada
Our kambani yevashandi muGrenada inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare post nzvimbo muGrenada vakasununguka.
Virtual Nhare dzeNhamba dzeGrenada
Bhizinesi foni nhare dzeGrenada pamwe ne nhamba dzeGrenada Nyika 102 uye Maguta 291.
Zvemari Kuronga Services muGrenada
Accounting, kushingairira kwakakodzera muGrenada uye zvakawanda.
Virtual Hofisi Kero muGrenada
Setup bhizinesi muGrenada
Mushure meCitizenship nekudyara kuGrenada, setup bhizinesi mu Grenada.
Isu tinopa pazasi zvakataurwa mhinduro dzeIT muGrenada
Webhu Kugadzira muGrenada
Ecommerce Kuvandudza muGrenada
Webhu kuvandudza muGrenada
Kubudirira kweBlockchain muGrenada
App Kubudirira muGrenada
Software Kubudirira muGrenada
Magweta e Citizenship neInvestment muGrenada
Isu tinopa Citizenship yepamutemo neInvestment mhinduro dzeGrenada uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha, kuGrenada, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo yeGrenada ine vamiririri vekunze vanoenda kuGrenada, isu tine mukurumbira wekuburitsa yakanakisa mutengi sevhisi chiitiko cheGrenada na kujekesa nzira dzekudyara mhinduro kune vanhu veGrenada nemhuri dzavo. Hedu Citizenship neinvestment timu yeGrenada inopa yakagadziriswa mhinduro dzekubudirira kweMutengi.
Nhengo dzemhuri yako (vana, mukadzi, vabereki) vanokodzera kupihwa mvumo yekugara kuGrenada, pamvumo yako yekugara muGrenada inogamuchirwa.
Simba regweta reGrenada rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako ne Citizenship nevamiriri vezvekudyara muGrenada. Kana iwe uri muGrenada kana kuronga kushanyira Grenada, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadhare yakawedzera yekuwana Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani kweGrenada uri kure, simba rako regweta rinofanirwa kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe mundima yeGrenada. Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yakatendeka kana kubvumidzwa nemumiriri weGrenada.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Ugari neInvestment muGrenada
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara muGrenada?
Kugara nekudyara kuGrenada, kunogona kutsanangurwa sekuti, kuwana pekugara kweGrenada kuburikidza nekudyara muhupfumi hweGrenada kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera kuti ugare nekudyara kuGrenada, ugari nechirongwa chekudyara Grenada. inotsigirwa nekugara nenzvimbo dzekudyara Grenada, kuburikidza nekugara kwedu kwakanakisa nemagweta ekudyara kuGrenada, kugara kwakanyanya nemagweta ezvekudyara kuGrenada uye kugaramo kwakanakisa nevarairidzi vezvekudyara kuGrenada, vachishanda pekugara pakanaka nevamiririri vezvekudyara kuGrenada, uye akanakisa mafemu ekubvunza vekupinda munyika. muGrenada.
Kugara nemabasa ekudyara kweGrenada | Kugara patsva nevamiriri vezvekudyara muGrenada | Kugara patsva nemagweta eInvestment kuGrenada | Kugara nemagweta ekudyara muGrenada | Kugara nevezvekudyara varidzi kuGrenada
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara muGrenada?
Ugari nekudyara kuGrenada, kunogona kutsanangurwa sekuti, kuva mugari weGrenada kuburikidza nekudyara muhupfumi hweGrenada kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe kuGrenada. Nyorera kuva mugari wemo nekudyara kuGrenada, ugari nehurongwa hwekudyara kweGrenada inotsigirwa nehugari nehumambo hwekudyara Grenada, kuburikidza nehukama hwedu hwakanakisa nemagweta ekudyara kuGrenada, ugari hwakanakisa nemagweta ezvekudyara kuGrenada uye hukama hwakanakisa nevanoona nezvekudyara kweGrenada, vachishanda kuva mugari wakanakisa nevamiririri vezvekudyara muGrenada, uye akanakisa mafemu ekubvunza vanoenda kune dzimwe nyika muGrenada.
Affordable Investor yekufambisa mabasa eGrenada | Vanodhura vanoenda kune dzimwe nyika vanokumbira kuGrenada | Vanodhura varidzi vemari vanoenda kune dzimwe nyika maGrenada | Vanodhura varidzi vekupinda munyika magweta kuGrenada | Vanodhura varidzi vekupinda munyika vanachipangamazano veGrenada | Affordable immigration law firms for Grenada
Ndeipi tsananguro yepasipoti yechipiri muGrenada?
Yechipiri pasipoti muGrenada, inogona kutsanangurwa sekuti, kuva mugari wepamutemo weGrenada kuburikidza nekudyara muhupfumi hweGrenada kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, real estate, bhizinesi, hurumende zvisungo, nezvimwe. Nyorera pasipoti yechipiri kuGrenada, yechipiri pasipoti chirongwa cheGrenada inotsigirwa wechipiri pasipoti masevhisi eGrenada, kuburikidza nemagweta edu epiri epasipoti kuGrenada, magweta echipiri epasipoti kuGrenada uye akanakisa echipiri mapasipoti vanopa mazano eGrenada, vanoshanda kumahofisi echipiri epasipoti eGrenada, uye akanakisa mafemu ekubvunza vanoenda kune dzimwe nyika kuGrenada.
Chechipiri pasipoti masevhisi eGrenada | Chechipiri pasipoti vamiririri muGrenada | Chechipiri pasipoti magweta muGrenada | Yechipiri mapasipoti magweta muGrenada | Wechipiri pasipoti vanopa mazano eGrenada
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa kuGrenada?
Ndarama vhiza kuGrenada, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana pekugara mvumo yeGrenada kuburikidza nekudyara muhupfumi hweGrenada kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, hurumende zvisungo, bhizinesi, zvivakwa, nezvimwe. Nyorera vhiza yegoridhe kuGrenada, chirongwa chendarama vhiza yeGrenada inotsigirwa goridhe vhiza masevhisi eGrenada, kuburikidza neyedu akanakisa egoridhe visa magweta kuGrenada, akanakisa egoridhe vhiza magweta kuGrenada uye akanakisa endarama vhiza mawara eGrenada, anoshanda pane akanakisa endarama vhiza vamiririri kuGrenada, uye akanakisa ekupinda kwekufambisa makambani kuGrenada.
Goridhe vhiza masevhisi eGrenada | Ndarama vhiza vamiririri muGrenada | Magoridhe vhiza magweta muGrenada | Magoridhe vhiza magweta muGrenada | Goridhe vhiza varairidzi veGrenada
Ndechipi chiri chidiki chekudyara kweCitizenship nekudyara kuGrenada?
Pashoma kudyara kweCitizenship nekudyara kuGrenada iUS $ 150,000.
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuGrenada ye Citizenship nekudyara?
Ehe, gweta redu muGrenada nevamiriri kuGrenada vanopa rutsigiro rweCitizenship nekudyara muGrenada.
Ugari neInvestment kuGrenada inodhura?
Mutengo weCitizenship neInvestment kuGrenada uye Citizenship nemari inodiwa mari yeGrenada ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete mari yekubvunzurudza kweCitizenship neInvestment kuGrenada, isu tinopawo yakawanda zvimwe zvekutsigira Citizenship neInvestment mhinduro.
Ndeapi vagari venyika vanogona kunyorera Citizenship nekudyara kuGrenada kana investor visa kuGrenada?
Ugari nemabasa ekudyara mari anogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mienzaniso mishoma ndeye Citizenship nekudyara kuGrenada kubva kuAsia, Citizenship nekudyara kuGrenada kubva kuAfrica, Citizenship nekudyara kuGrenada kubva kuEurope, Citizenship nekudyara kuGrenada kubva kuSouth America, Ugari nekudyara kuGrenada kubva kuMalaysia, Citizenship nekudyara kuGrenada kubva kuBangladesh, Citizenship nekudyara kuGrenada kubva kuIndonesia, Citizenship nekudyara kuGrenada kubva kuSri Lanka, Citizenship nekudyara kuGrenada kubva kuNepal, Citizenship nekudyara kuGrenada kubva kuIndia uye Citizenship nekudyara kuGrenada kubva kuUAE.
Hugari hwehunyanzvi neInvestment Guidance zveGrenada
Kumbira kubvunza Mahara kwehukama hwako neInvestment kuGrenada
Mazwi akakosha mu Citizenship neInvestment yeGrenada
Hurumende yeGrenada Official Webhusaiti: www.gov.gd
Grenada Hotel uye Tourism Association: www.muzankada.gd
Grenada Board of Tourism Yechokwadi Webhusaiti: www.wXNUMXradio.com
Official Grenada Citizenhip ne Investment Program
Ministry of Foreign Affairs | Hurumende yeGrenada
Ministry of Hutano Grenada
Link to Dhipatimendi Rekupinda muGrenada , Inotarisirwa kuumba marongero ekuchimbidza Immigration muGrenada